ပပျောက်စေချင်ပါသည် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » ပပျောက်စေချင်ပါသည်
Posted by manawphyulay on Jan 29, 2013 in Business & Economics | 10 comments
ရန်ကုန်မြို့လယ်၊ ရုပ်ရှင်ရုံများတစ်ဝိုက်တွင် ရှေ့အစဉ်အလာမပျက် နေရာယူကြီးစိုးနေသော အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ အကြောင်းကို အများပြည်သူ သိစေချင်သော စေတနာအပြင် အများပြည်သူ အေးချမ်းစွာ သွားလာနိုင်စေရန် အတွက် တင်ပြရေးသားလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ရန်ကုန်မြို့တွင် ရုပ်ရှင်များ စတင်တည်ထောင် ဖွင့်လှစ် ပြသစဉ်ထဲက ရုပ်ရှင်လက်မှတ် မှောင်ခိုသမား အတော်သောင်းကျန်းနေခဲ့သည်လို့ သိရှိခဲ့ရပါသည်။ အရင့်အရင်ကလည်း လက်မှတ်မှောင်ခိုသမားများကို တစ်နည်းနည်းဖြင့် ရှင်းလင်းခဲ့ကြမယ်လို့ ထင်ပါသည်။
ယခုအချိန်ထိ ပပျောက်မှု မရှိသေးဆိုတာကိုလည်း မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ တွေ့ရှိနေရပါသည်။ ယခုတစ်လော အဖြစ်များတာကတော့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းကောင်းများတင်သော ရုံများတွင် ဥပမာ သွင်ရုံတို့၊ သမ္မတရုံတို့တွင် တွေ့ရှိနေမိခြင်း ပါပဲ။ ရုပ်ရှင်ကြည့်မယ့်သူများကို လိုက်လံရောင်းချခြင်းအပြင် ဖြတ်သွား ဖြတ်လာများကိုလည်း အတင်း လိုက်လံ အနှောင့်အယှက်ပေးနေသည်မှာ မြို့တော်အင်္ဂါရပ်ကို အလွန်ပင် အရုပ်ဆိုးစေပါသည်။ တချို့နိုင်ငံခြားသားတွေ ဖြတ်အသွားတောင် မရှောင် လိုက်လံအတင်းကာရော လက်မှတ်တွေ ထိုးရောင်းနေတာလည်း မြင်တွေ့နေ ရပါသည်။ ပွင့်လင်းလာသည့်အလျောက် နိုင်ငံတကာ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တချို့သည် ဒီမြင်ကွင်းများကို ဓာတ်ပုံရိုက်ယူနေကြတာကို ရုပ်ရှင်မှောင်ခို လက်မှတ် ရောင်းသူများသည် အပြုံးမပျက်ဓာတ်ပုံ အရိုက်ခံ နေကြ ခြင်းဖြင့် အံ့သြဖွယ်မြင်တွေ့နေရပါသည်။ ရုပ်ရှင် ကြည့်ချိန် မရောက်သေးဘဲ ရုပ်ရှင်ရုံအမှုထမ်းများမှာ လက်မှတ် ကုန်သွားပြီဆိုတဲ့ အပြောအဆိုကြောင့် မှောင်ခို သမားတွေရဲ့ လက်ထဲက လက်မှတ်တွေ ၀ယ်ကြည့် နေကြတဲ့သူတွေကိုလည်း အံ့သြမိပါသည်။ ရုပ်ရှင် လက်မှတ် မှောင်ခိုတွေအတွက် ဥပဒေရှိမရှိတော့ မသိပါ။ ရုပ်ရှင်လက်မှတ် မှောင်ခိုနှိမ်နင်းရေးအတွက် လုံလောက်တဲ့ ဥပဒေတစ်ခု အရေးတကြီးလိုအပ်နေပြီလို့ မြင်မိပါသည်။ တစ်ဖက်ထဲကိုပဲ ပပျောက်အောင် ကြံဆောင်လို့ မရပါဘူး။ အများပြည်သူများကလည်း တစ်ဖက်တစ်လမ်းက ကူညီသောအားဖြင့် မှောင်ခို လက်မှတ်များကို ၀ယ်မကြည့်ကြဘဲ တိုက်ဖျက်ကြမှသာ မှောင်ခိုများ ပျက်သုဉ်းသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကြည့်တဲ့သူက ကြည့်တော့ ရောင်းတဲ့သူကလည်း ရဲရဲဝင့်ဝင့် ရောင်းနေကြခြင်း ဖြစ်ပေမည်။
နိုင်ငံတော်ကြီး မြို့တော်အင်္ဂါရပ်နဲ့ညီစေဖို့အတွက် ရဲနှင့် ပြည်သူအပြင် ရုပ်ရှင်ရုံအမှုထမ်းများလည်း ၀ိုင်းဝန်းပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်ကြမယ်ဆိုရင်ဖြင့် နိုင်ငံခြားသားများအလယ်တွင် ဂုဏ်တင့်တယ်စေဖို့ ၀ိုင်းဝန်း နှိမ်နင်းပေးကြပါရန် မှောင်ခိုအဖွဲ့များအား ပပျောက်အောင် တိုက်တွန်းရေးသားတင်ပြလိုက်ရခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
မှောင်ခိုတွေဆီကို လက်မှတ်ဘယ်လိုရောက်နေလဲ? အမှန်တကယ် ကြည့်တဲ့သူ မဟုတ်ဘဲနဲ့ ဘာလို့ရုံက လက်မှတ်ရောင်းတာလည်း? အမှန်တကယ်ကြည့်တဲ့သူကို စီစစ်ပြီးရောင်းတဲ့ စနစ်လုပ်လိုက်ရင် ဥပဒေထုတ်စရာ တောင်မလိုပါဘူးဗျာ။ ဥပမာ- လက်မှတ်ဝယ်ပြီးတာနဲ့ ရုံထဲဝင်စနစ် ဒါမှမဟုတ် ရုံထဲ ၀င်ပေါက်မှာ လက်မှတ်ဝယ် ၀င်စနစ် အဲလိုမျိုးရယ်ပေါ့လေ။ တကယ်တော့ ရုံကလက်မှတ်ရောင်းနဲ့ ပေါင်း လုပ်တာမျိုးဖြစ်မယ်ထင်သလို အခုနောက်ပိုင်း အဆင့်မြင်ရုံတွေက ပုပ္ပလိက ထဲရောက်သလောက်မို့ အဲ လိုအကျင့်ပျက်ဝန်ထမ်းတွေကို ဖြုတ်ပစ်လိုက်၊ အဲလို ဆိုနည်းသွားနိုင်မယ်ထင်တယ်လေ။
အဓိက ကတော့ ၊ အောက်မှာ minn_annawar ပြောသွားသလိုပါပဲ ။
ဒီနေ့မှ အသဲအသန် မကြည့်ရရင်မနေနိုင်သော ကိုသဲသဲ၊ မသဲသဲ တို့ကြောင့်ပါ ။
ဒီမိုကရေစီ ခေတ်ကြီးဆိုတော့ ၊
၁ ။ အမှန်တကယ်ကြည့်တဲ့သူကို စီစစ်ပြီးရောင်းတဲ့ စနစ် တို့ ၊
၂ ။ ရုံကလက်မှတ်ရောင်းတွေကိုကြပ်ကြပ်မတ်မတ် ကိုင်တွယ်တာတို့ ၊
၃ ။ မှောင်ခိုလက်မှတ်ရောင်းတဲ့သူတွေကိုလိုက်ဖမ်း အရေးယူမယ်တို့ ၊
လုပ်ဖို့ မလိုပါဘူး ထင်ပါတယ် ။ ရုပ်ပျက်သွားမယ်လေ ။
ကိုယ်တွေကသာ မတန်တဆ ဈေးကြီးပေး ဝယ်မကြည့်နှင့် ၊
သူ့အလိုလို ပျောက်သွားမှာပါ ။
အဓိက ကတော့ အသဲအသန် မကြည့်ရရင်မနေနိုင်သော ကိုသဲသဲ၊ မသဲသဲ နဲ့ မိသာစုသဲသဲတွေ က မှောင်ခိုလက်မှတ်ကိုဝယ်ကြည့်နေကြလို့ဖြစ်မှာပေါ့။ ၀ယ်ကြည့်မဲ့သူမရှိရင် မှောင်ခိုလက်မှတ်ဆိုတာဟာလည်း ပေါ်လာမှာတောင်မဟုတ်ဖူး။
အခုအချိန်အခါမှာ ရုပ်ရှင်ရုံတွေမှာ ကြည့်ကြတဲ့လူဦးရေဟာ အတော်ပဲနဲသွားပါပြီ။
မှောင်ခိုလက်မှတ်ရောင်းတဲ့သူတွေကိုလိုက်ဖမ်း အရေးယူမယ်ဆိုရင်တော့ လက်မှတ်မှောင်ခိုရောင်းတာလဲ. လုပ်စားရဲမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ရုံကလက်မှတ်ရောင်းတွေကိုကြပ်ကြပ်မတ်မတ် ကိုင်တွယ်ရင်လည်း လက်မှတ်မှောင်ခို ဆိုတာပေါ်ပေါက်လာမှာမဟုတ်ဖူး။
အမှန်ကတော့ ဒီလိုဗျ .. အမှားကတော့ ဟိုလို
လက်မှတ်ရောင်းတွေက မှောင်ခိုကိုရောင်းရင် ဈေးပိုရတယ်ဒါ့ကြောင့်
အစ်မဗျာ . . . ကျုပ်ထမင်း အိုး ကို ဒုတ် နဲ့ ထိုး တယ်ပေါ့လေ . . . . လွယ်လွယ် ရလို့ လုပ် မိတာပါဗျာ . . အဲ့လို မှောင်ခို မရောင်း ရတော့ရင် …. ဆူးလေ လမ်းပေါ်မှာ ဖျာချင်းပြီး ဖိနပ် အဟောင်း ရောင်းမှာ . . . . ဒီမိုကရေစီ ရနေပြီ ဗျ ………. ဟွန်း ……
အွန်လိုင်း တစ်ကက် ဝယ်/ရောင်း စစ်စတမ် လုပ်သင့်ပါတယ်။
အဟွတ်။ အဟွတ်။ အဟွတ်။
အွန်လိုင်းလက်မှတ်ရောင်းကိုရေးတဲ့ System မှာ နိုင်ငံတကာက System ထက် ပိုတဲ့ Function လေးထည့်ပေးလိုက်ပါကွဲ့။
လက်မှတ်ကုန်ပြီ ဆိုတာကို One Click ထဲ နဲ့ ပြီးသွားအောင်။
လက်ညောင်းခံပြီး မရောင်းရသေးတာ ကို ရောင်းပြီးပြီလို့ တစ်ခုချင်း Click လုပ်နေစရာမလိုတော့ဘူး။
Customize လုပ်ခ ကိုတော့ ပိုပိုလေးတောင်း။
ရုပ်ရှင်ရုံကလက်မှတ်ရောင်းတွေက ဈေးကွက်ထွင် ….
မှောင်ခိုသမားတွေက ဈေးကွက်ချဲံ့  …
သူ့နေရာနဲ့ သူ စီးပွားရေးလုပ်နေကြတာ ဆိုတော့ကာ…
နောက်ဆုံး ၀ယ်ယူ စားသုံးသူမှာ သာ အပြစ်ရှိပါဂျောင်းးးးးး
ထင်ရာမြင်ရာ မန့်သွားပါအိ … :hee: